Klout ले कसरी काम गर्दछ? | Martech Zone
Klout ले कसरी काम गर्दछ?
बिहीबार, जुलाई 5, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
नम्बरहरू फरक पर्दछ जब यो अनलाइन मार्केटिंगमा आउँदछ। म भएको छु Klout को आलोचनात्मक तर म अझै पनी चाहन्छु कि कम्पनीहरूले स्थान र प्रभाव व्यक्ति अनलाइन निर्धारण गर्न साधारण मेट्रिक्स विकास गर्न कोशिस गर्दैछ। म Klout अ too्क धेरै बुझ्ने ढोंग गर्दिन, र म यसको बारेमा धेरै चिन्ता पनि गर्दिन।
तर ... समय समयमा म भित्र जाँदिन मेरो Klout स्कोर (को Klout iPhone अनुप्रयोग यसलाई तपाइँ प्रदर्शन गर्नुहोस्!)। यदि तपाईं वास्तवमै जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी Klout स्कोर काम गर्दछ, यहाँ तपाईंको लागि इन्फोग्राफिक छ!
द्वारा इन्फोग्राफिक OnlineDegrees.com
टैग: kloutKlout स्कोर
सामाजिक ग्राहक सेवा को बृद्धि
के बिक्री टोली ब्लग हुनु पर्छ?